Nhau - Iyo Brand New Screeds
Iyo asphalt paver inoshandiswa kugonesa iyo roller kuti iite iyo yekumanikidza maitiro nekupa yakaenzana pamusoro pechiso uye homogenous precompaction ine yakakwana kugadzikana. Kuita kwakavimbika ndiko kuvimbisa kuzadzisa izvi zvinodiwa. Zvese zvemazuva ano asphalt pavers zvakagadzirwa nezvikamu zviviri zvikuru, tarakita uye screed inoyerera.
Mavhiri ane mavhiri anogona kuvhiyiwa zvakanyanya kuchinjika uye akakodzera pakuisa zvisina kuvhurika zvigadzirwa uye pane isina kusungwa nzvimbo. Pavers dzakateedzerwa ndedzekushandisa kuisa zvimwe zvakapamhama zvikamu uye pakadzika materu.
Iyo screed inoshandura iyo asphalt musanganiswa kune chaiwo ukobvu, giredhi, kuyambuka uye korona chimiro. Iyo yekuzvidzora-inoyerera inoyerera screed inosungirirwa nemaoko emaoko kune chero mativi etarakita. Chero kusanzwisisika kwepamusoro kunokonzera mashoma mafambiro.
Iko kushuva kwaunoda kwemusanganiswa kunogona kuwanikwa nekugadzirisa zvigunwe zvigunwe, inova ndiyo yakangwara dhizaini. Chero kufamba kwemaviri zvigunwe kunokanganisa kuenzana uye kunotungamira mukumuka kana kudonha kwescreed.
Screeds dzanhasi dzinopiswa zvakanyanya nemagetsi nepo vhezheni yechinyakare, iyo inopisa gasi inopisa ichiri kuwanikwa. Kupisa kunodzivirira iyo yega ndiro kubva kunhonga asphalt inopisa.
Kurema kwescreeds ndiyo paramende ine hunyanzvi pane 'kugona kwayo kugadzirisa asphalt. Iyo inorema iyo screed iri, zvirinani iko kutangisisa. Iyo VÖGELE AB500 TP2 screed ndiyo yakanyanya kuremerwa yatinopa kubva kune yedu yakakura VÖGELE zvikepe, zvine maitiro akanaka kwazvo. Kuomesa masisitimu anoshandiswa kubatsira kusanzwisisika asi zvakare anofambisa iyo screed kuti ifambe. Kunyangwe kusarudza kutsika-tsika uye / kana kudedera screed kunotsamira pane zvinoshandiswa pamwe nemhando dzemusanganiswa, ukobvu hwesenduru, zvaunofarira zvemuno uye zvakatemwa.
Xuzhou Chengzhi Kuvaka, semutengesi wezvipenga zvikamu, inopa dzakasiyana siyana muchina zvishongedzo zvepavers. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu, unogamuchirwa kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama. Isu takanangana nekupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekushandira vatengi kune kwavo kugutsikana. Isu tine chokwadi chekuvaka hukama hwakareba-bhizinesi.